I-NextMapping | I-NextMapping ™ Infographics
E-NextMapping™ sikholelwa ocwaningweni - sikholelwa futhi ekunikezeni ucwaningo ngefomethi yokugaya ukudla kalula.
I-infographics yethu 'ngamadeshibhodi' ngokuzayo kwezihloko zomsebenzi.
Ukuthi Abaholi Bangakhuphula Kanjani Amakhono Futhi Babuye Bafake Amakhono Abasebenzi Ukuhlangabezana Nezidingo Zebhizinisi Ezintsha Zekusasa
Kunesidingo esiphuthumayo sabantu ngabanye, abaholi kanye nabasebenzi ukukhomba izikhala zamakhono nokwakha uhlelo lokuthi 'yini elandelayo' ekwakheni amakhono adingekayo ukuzulazula kokujwayelekile okulandelayo.
Lezi zinyathelo ezi-6 zokubhekana nokusetshenziswa kabusha kwamandla kanye nokwakhiwa kwamakhono zinikezwe kule infographic.
Abasebenzi beKhono abangama-5 badinga ukuphumelela ku-'kulandelayo 'Okujwayelekile Kokusebenza
Ngokukhuphuka komsebenzi okude nemodeli ye-hybrid yesikhathi esizayo yokusebenza (okukude / ku-office) sonke sidinga ukukhulisa amakhono ethu 'wesintu'.
Le infographic inikeza ukuqonda kanye namakhono wokuziphendukela kwemvelo adingeka kubasebenzi ukuze baphumelele kokulandelayo 'kokujwayelekile' komsebenzi.
Ukusebenza Okusha Nokulandelayo 'Okulandelayo'
Impilo yangemuva kobhubhane kanye nomsebenzi ongokoqobo kuzobukeka kuhluke kakhulu kunendlela izinto ebezikhona ngayo. Usukulungele?
Le infographic inikeza zombili izibalo namathuluzi wokukhulisa amakhono akho okuqhubekela phambili kokujwayelekile komsebenzi wethu.
Ungawukhulisa Kanjani umkhiqizo ngenkathi usebenza kude
Enye yezinselelo ezinkulu kubantu abasebenza kude wukuthi ungahlala kanjani ukhiqiza.
Sinikeza 8 amathiphu ukuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi ungakhiqiza kakhulu nsuku zonke.
Lokhu infographic kunikeza zombili izibalo namathuluzi sendlela ongayikhulisa ngayo ukusebenza kwakho ukude.
Okulandelayo™ Isimo Esisha Sokusebenza
Ubhubhane lweCoronavirus selufakazele ukuthi umsebenzi awusoze wafana.
Isiko lendawo yokusebenza emasontweni ambalwa edlule likhombisile ukuthi izinkampani ZINGENZA impumelelo nabasebenzi bakude. Ubhubhane lwe-Post ngeke kube 'ibhizinisi njengenjwayelo' luzoba yinto evamile entsha yebhizinisi '.
Lokhu kusho ukuthi abaholi kumele babe badala, babe nozwela futhi bazimisele ukushintsha izakhiwo ezikhona ukugxila 'kubantu kuqala'.
Lokhu infographic kunikeza izibalo on "NextMapping™ Indlela Ejwayelekile Yomsebenzi. ”
Ukuqamba: Isu Elibalulekile Lango-2020 nangaphaya kwalo
Ama-94% abaphathi abahloliwe athe ukuvela kwezinto ezintsha kuyinto ebaluleke kakhulu ngo-2020 nangale kwalokho.
Ukusungula kufaka ubuhlakani besikhathi sangempela futhi kudinga abantu nobumbano namasiko.
Kule infographic entsha thola i-ROI yezinto ezintsha kanye nezinye izinkampani 'ezinqobayo' lapho zintsha.
Kungani iVidiyo 'iyiQhinga Lokwenza Okufanele' Lekusasa Lomsebenzi
Ingabe wena nenkampani yakho levungula ukuqasha futhi nilondoloze ithalente lenu eliphakeme?
Ucwaningo selukhombisile ukuthi ividiyo isetshenziswa yi-67% yababuki beselula kanye neMillenials kanye noGen Z bafuna amavidiyo ukuthola okuningi mayelana nalabo abangaba abaqashi.
Ukuthola okuningi mayelana nokuthi kungani ividiyo kuyicebo lekusasa lomsebenzi ukulanda le infographic entsha yithimba lethu e-NextMapping.
I-NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi
Izahluko 1-8 I-infographics kusuka encwadini entsha, i-NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi
Ukuqasha ama-Millennials kanye noGen Z endaweni yokusebenza elungele ikusasa
Umncintiswano wethalente usazoqhubeka ukhuphuka njengoba abantu benezinketho eziningi zomsebenzi kunanini ngaphambili.
Izinkampani sezincintisana nezinye izinkampani emhlabeni jikelele ukuheha nokugcina abantu abanamakhono. Ukungeza kule nselelo amaMillenials amaningi nabeGen Z bakhetha ukuba usomabhizinisi.
Ungaba kanjani onqenqemeni oluholayo lokuqasha izinkulungwane zeminyaka kanye noGen Z's?
Bheka lokhu infographic ngezibalo nokuqonda ekuqasheni ikusasa lomsebenzi.
Abasebenzi Bamukela Ukuguqulwa Kwedijithali ne-AI
Kubukeka sengathi iningi labantu lilangazelele ushintsho olwengeziwe lwedijithali ne-AI - hlola i-Infographic yethu ukuze ufunde kabanzi.
Ama-Hacks e-8 yobuholi Ukuhola Amaqembu Akude
Ngo-2030 amaqembu angama-50% azobe esebenza kude - noma ngabe inkampani yakho njengamanje inamaqembu akude noma cha abaholi kudingeka babe namasu athile wokubandakanya abasebenzi bakude.
Izisebenzi ezikude zifuna inzuzo yokusebenza kude futhi Funa ukuzizwa zifakiwe njengamalungu eqembu abalulekile.
Abaholi beKhono Labantu be8 Badinga Ukuhamba Ngekusasa Lomsebenzi
Ikusasa lomsebenzi akuwona umqondo, ungokoqobo futhi wenziwa izinqumo nezenzo zethu namuhla.
Ubuchwepheshe obusha buyadingeka ukukhulisa izixazululo zabantu futhi sonke kudingeka sisebenzise ubuchwepheshe ukuze sisebenzise ithuba lokwakha ikusasa. Kodwa-ke, ubuchwepheshe bodwa abuzokwakha ikusasa lethu elihle, ngabantu nokugxila kubantu kuqala okuzoguqula ikusasa ngokuphelele.
Bheka le infographic kumakhono wobuntu e-8 okudingeka abaholi badlule ekusaseni lomsebenzi.
I-10 ephezulu Iguqula Zonke Izidingo Zomholi Okufanele Zenziwe Ukuze Zilungele Ikusasa
Wake wazibuza ukuthi abanye abantu bakwazi kanjani ukuthola umbono futhi bawenze ngokushesha?
Imvamisa kungenxa yokuthi lowo muntu usethuthukise amazinga aphezulu 'obuholi bokushintsha' - ikhono lokuzivumelanisa, ukufunda nokwenza okuthile ngokushesha.
Bheka le infographic kuzinguquko ezenziwa abaholi okufanele bazenze ukuze bangalungele ikusasa kodwa futhi bakwazi 'ukudala ikusasa' ngokushesha nangendlela efanele.
Amaphakethe aphezulu wobuholi be-10 be-2018
Imikhuba eminingi yobuholi esesifikise lapho sikhona namhlanje ngeke isifinyelele lapho kudingeka sibe khona Ikusasa Lomsebenzi.
Le infographic inikela ngokusebenza okusebenzayo kwe-Hobuholi Hacks kwe-2018.
Izici ze-13 Impumelelo Yezinhlangano Ezilungele Ukufika
Izinkampani ezinezinhlaka ezithile endaweni noma amasu obuholi asemaphethelweni ophambili wezinhlangano ezilungele ikusasa.
Landa yethu 'shazi' Ikusasa Lomsebenzi infographic lokho kunikela ngemininingwane yakamuva yokuthi ikusasa lomsebenzi lizobukeka kanjani futhi kukunikeze amaphuzu wokuthi ungawakha kanjani amasu akho nezindlela zakho njengomholi nenkampani yakho.
Ubuholi Obabiwe: Wonke umuntu Ungumholi
Landa yethu 'ngokubheka nje' Shared Ubuholi infographic enikeza idatha yakamuva yokuthi ukuhola okwabiwe Umqondo uzobukeka njengakusasa lomsebenzi.
Ukuthuthukisa Abaholi Bethu Basasa
Ubuwazi ukuthi nsuku zonke iminyaka elandelayo ye-19 i-10,000 Baby Boomers izofinyelela ubudala be-65 futhi isivele namhlanje Ama-Millenials akha i-50% yabasebenzi emhlabeni jikelele?
Amakhono amasha wobuholi ziyadingeka ukuhlangabezana nokulindelwe kweMillennial neGen Z's. Landa le Infographic enolwazi olubalulekile oluzokusiza uqonde izidingo zabo ukuze ukwazi ukuhlela ngempumelelo ukuthuthuka kwabo!
Ikusasa Lenhlangano Yezisebenzi
Ikusasa Lomsebenzi Manje futhi Izinhlangano kufanele Zibe Zigxile Ekusasa ukuze uphumelele. Landa lokhu kwembula kwe-infographic Ukwazi ukuthi ukuGxila kwakho kuphi… Okwedlule noma Okuzayo!
Ama-5 Amacala Ezibalo Ezihlukahlukene
Ikusasa elibalulekile lekhono lomsebenzi ikhono lokubona kuzo zonke izinhlangothi. Lokhu kusho ukubona izimo nge-lens yakho / eminye / imboni / iklayenti / umhlaba jikelele - le infographic inikeza ukuqonda ukuthi ungakha kanjani amandla wezindlela eziningi ngekusasa lomsebenzi.
Izinkampani ezikhuthazayo ze5 ezinekusasa labaholi bomsebenzi
Landa leli kusasa lesikhathi somsebenzi elenza izibonelo zezinkampani ezahlukahlukene ze-5 nokuthi abaholi bazenza kanjani izinto zokuthi balungele ikusasa manje nokuthi yini esingayifunda endleleni yabo.
Bhalisa manje ukulanda i-whitepaper
Uma Amarobhothi Ayikusasa Lokusebenza - Yini Okulandelayo Ngabantu?
Sicela ukhetheCanadaI-united statesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosI-Congo, iDemocratic Republic of theI-Congo, i-Republic of theCosta RicaIvory CoastCroatiaCubaCuraçaoCyprusI-Czech RepublicDenmarkDjiboutiDominicai-Dominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasi-Hong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatie-North KoreaINingizimu KoreaKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsE-New ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalE-Puerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé and PríncipeI-Saudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaIningizimu AfrikaSpaini-Sri LankaSudanSudan, SouthSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaigalikuniTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineI-United Arab Emiratesi-United KingdomUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USYemenZambiaZimbabwe